Nhau - Veyong yakabvumidzwa zvakare kune maviri matsva eChikoro II veterinary zvinodhaka
1. Kuongorora kwemishonga mitsva yemhuka
Kunyoresa Kuratidzira:> Kirasi II
Chinyowani chipfuyo chitupa kunyoresa chitupa nhamba:
Tidiluoxin: (2021) Nyowani weVeterinary Chitupa Chemishonga Nha
Tidiluoxin Jekiseni: (2021) Nyowani Mhuka Mishonga Nha
Chinhu chikuru: Tidiluoxin
Basa uye shandisa: Macrolide mishonga inorwisa mabhakitiriya. Iyo inoshandiswa pakurapa nguruve mweya wekufema unokonzerwa neActinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida uye Haemophilus parasuis ayo anonzwisisa Tediroxine.
Usage uye chipimo chemushonga: Kubva paTaidiluoxin. Intramuscular jekiseni: Imwe dose, 4mg pa1kg uremu hwemuviri, nguruve (yakaenzana ne1ml jekiseni yechigadzirwa ichi pa10kg yemuviri uremu), shandisa kamwe chete.
Tadilosin ndeye 16-membered cyclohexanide antibiotic yakatsaurirwa kune semisynthetic mhuka, uye maitiro ayo ekurwisa mabhakitiriya akafanana neaya e tylosin, ayo anonyanya kudzivirira peptide cheni kukwirisa uye kutitadzisa kusangana kwemabhakitiriya mapuroteni nekusunga kune 50S subunit yebhakitiriya ribosome. Iyo ine yakafara antibacterial spectrum uye ine bacteriostatic mhedzisiro kune ese akanaka uye mamwe mabhakitiriya asina kunaka, kunyanya anotapurika nehutachiona hwekufema, senge Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, uye Streptococcus suis.
Parizvino, dambudziko rekutanga rakatarisana neindasitiri yekuberekesa zvipfuyo pasirese ndeyekurwara kwakanyanya uye kufa kwezvirwere zvekufema, nekurasikirwa kwehupfumi kunokonzerwa nezvirwere zvekufema zvinosvika mazana emamirioni ema yuan pagore. Tadiluoxin jekiseni inogona kupa iyo yese nzira yekurapa yekudzivirira uye kurapwa kwezvirwere zvekufema zvinotapukira zvinokonzerwa nehutachiona hwehutachiona munguruve, uye ine yakajeka kwazvo yekurapa mhedzisiro pazvirwere zvekufema munguruve. Iyo ine mikana yakawanda senge yakakosha yekushandisa mhuka, muyero mushoma, iyo nzira yese yekurapa nehumwe manejimendi, kubviswa kwenguva refu hafu-yehupenyu, kukwirira bioavailability uye yakaderera masara.
3. Kukosha kweR & D yakabudirira yemishonga mitsva yemhuka kuna Veyong
Nekuvandudzwa kwemaindasitiri ekuberekesa munyika yangu, pasi pemamiriro ekukura kukuru uye kwakanyanya, iyo midzi midzi inonetsa kubvisa, utachiona hahuna kujeka, uye kusarudzwa kwemishonga hakuna chokwadi. Zvese izvi zvakakonzera kuwedzera kwezvirwere zvekufema munguruve, icho chave kusimudzira kukuru muindasitiri yenguruve. Dambudziko rakaunza kukuvara kwakakomba kumfuwo, uye kudzivirira uye kurapwa kwezvirwere zvekufema kwakwezva kutarisisa.
Mumamiriro ezvinhu akajairika, pamwe nekutora gwaro nyowani yezvipfuyo, chinosimbisa Veyong kuenderera mberi kwehunyanzvi hwekugadzira, kuwedzera R & D kudyara, uye kusimbisa kuunzwa kwematarenda. Izvo zvinoenderana nekambani kumisikidza nyanzvi dzekufema, nyanzvi dzematumbo, uye nyanzvi dzekupukuta. Zvinoenderana kuti ichi chigadzirwa parizvino chakakosha chigadzirwa chekudzivirira uye kurapwa kwezvirwere zvekufema munguruve. Zvinotendwa kuti chichava chimwe chigadzirwa chinoputika mushure mechigadzirwa chenyeredzi cheVeyong nzira yekufema mune ramangwana! Izvo zvakakosha zvikuru kusimudzira kukwikwidza kwemusika wekambani uye kusimbisa chinzvimbo chekambani seyanzvi hwekufema.